Arooskii Qarniga Qaybtiisa 1, aad Oo Lagu Soo Bandhigay Arooskii Qarniga Qaybtiisa 2, aad - Cakaara News
Arooskii Qarniga Qaybtiisa 1, aad Oo Lagu Soo Bandhigay Arooskii Qarniga Qaybtiisa 2, aad
Jigjiga(Cakaaranews) Arbaco, 14ka September 2016. Waxaa caawa xarunta deegaanka ee magaalada jigjiga gaar ahaan hoolka sayidka kadhacay aroos cajiib ah oo lamagac-baxay arooska qarniga qaybtiisa 1, aad oo ay kulamaanoobeen lamaanaha is-doortay ee sharafta leh oo kala ah: mudane Fatxi Cali Shariif(shariifka) iyo marwo Istaahil Maxamed Khaliif(princess istaahil) kaas oo ay kasoo qaybgaleen in kabadan 2kun oo shaqsi oo isugu jira mas’uuliyiinta ugu saraysa xukuumada DDSI oo uu horkacayo madaxwayne CMC, agaasino, shaqaalaha xafiisyada kaladuwan ee heer deegaan iyo shacab intaba. Waxaana arooskan lagu soo bandhigay arooska qarniga qaybtiisa 2, aad.
Hadaba, Wajigii hore ee arooskan qarniga qaybtiisa 1, aad ayaa lagu soo bandhigay hab-dhaqankii hore ee aroosyadii qadiimiga ahaa khaasatan dhanka labiska hidaha iyo dhaqanka iyo booliskii iyo maxkamadii oo soo kicinayay dadka islamarkaana kuxukumayay qaadida heesaha, geeraarada, gabayada, dhaantooyinka, furitaanka xeedhada iyo waydiinta hal-xidhaalaha iyadoo ay laxidhiidhay faraanti-galiskii, labiskii casriga ahaa, jaridii keega iyo waliba cayaaraha qoob-kacayaarka.
Kadibna, waxaa arooskan qarniga qaybtiisa 1, aad lagu soo bandhigay arooskii qarniga qaybtiisa 2, aad oo ahayd arin aad u farxad badan oo layaab leh balse aan geeska Africa horay uga dhicin iskadaa gayiga ay soomaalidu dagtee.
Arooska qarniga qaybtiisa 2, aad oo ah arin ugub ah oo lagu maamuusay gacantaada isku-aroos ayaa ah 25 aroos(qoys) oo kani ugu horeeyo oo uu Ururka Horumarinta Soomaalida Itoobiya bixinayo kharashka arooskooda islamarkaana uu todobo-baxoodu(honeymoon) kadhici doono wadamada kala ah: Turkey, Thailand, Singapore, Addisababa, Awasa, Malaysia iyo Maqale iyadoo ay gaar ahaan lamaanahan caawa uu todoba-baxoodu kadhici doono Singapore. Waxaana 24ka aroos ee hadhay laga soo kala xuli doonaa caasimadaha 11ka gobol, 6da maamul-magaalo iyo caasimada DDSI ee magaalada jigjiga iyagoo musharixiintu bakhtiyaa nasiib uqaadan doona. Waana bishuruud inuusan ninku horay uguursanin oo ay yihiin lamaane isqaba balse aan haysanin kharashkii arooska.
Kadibna, waxaa fursad lasiiyay lamaanaha isqaba ee aan haysanin kharashka arooska ee raba inay utartamaan 7 qoys(aroos) oo ay caasimada DDSI ee magaalada jigjiga qayb uheshay iyadoo 25 qoys oo isasoo sharaxday ay halkaa si cadaalad ah uga qaateen bakhtiyaa-nasiibkii oo ay heleen 7 aroos oo kamid ah 25kan qoys.
Qoysaskan kuguulaystay qaybtii caasimada deegaanka oo dareenkooda cabiraya ayaa sheegay inaysan marnaba filanaynin caawa inay nasiib uhelayaan in laga bixiyo kharashka arooskooda islamarkaana ay utartami doonaan meelihii ay kutodoba-bixi lahaayeen kadib marka lasoo xulo gobolada iyo maamul-magaalooyinka oo ay bakhtiyaa-nasiibka laqaadan doonaan.
Iskusoo wada duuboo, arintan ayaa ah arin ugub ah oo aan horay loo arag loona maqal balse looga gon leeyahay dhiiri-galinta dhalinyarada deegaanka.